कोभिड-१९ खोप सबैभन्दा पहिला कसले पाउला ? - The Public Today
कोभिड-१९ खोप सबैभन्दा पहिला कसले पाउला ?
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १०:५०
एजेन्सी, भदौ ३० गते । विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ९ महिनामा ९ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । करिब तीन करोड मानिस संक्रमित भएका छन् । विश्वमा सबैभन्दा अमेरिका, दोस्रोमा भारत र तेस्रो ब्राजिल कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित मुलुक हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकास गरिरहेको मोर्डेनाको खोप र अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरिरहेका खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् । अस्ट्राजेनिका र अक्सफोर्डले विकास गरिरहेका खोपको तेस्रो चरणको मानवीय परीक्षणमा केही समस्या देखिएपछि परीक्षण स्थगित गरिए पनि पुन: सुरु भइसकेको छ ।
प्रभावकारी खोप उत्पादनका लागि लगानीकर्ता र उत्पादकहरूले अर्बौं डलर दाउमा लगाएका छन् । रुसले यसअघि अगस्त ११ मा नै स्पुतनिक-भी खोपको परीक्षणहरूले कोभिड-१९ का बिरामीमा रोगप्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गरेको दाबी गरेको छ । रुसले आपतकालीन अवस्थामा खोप लगाउनसमेत सुरु गरिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी अक्टोबरबाट सामूहिक रूपमा सर्वसाधारणलाई पनि खोप लगाउन सुरु गरिने रुसको दाबी छ ।
औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले खोप निर्माण गर्ने भए पनि त्यस्तो खोप सबैभन्दा पहिले क-कसले लगाउन पाउँछन् भन्‍ने निर्णय उनीहरुले गर्दैनन् । “प्रत्येक संगठन वा देशले सबैभन्दा पहिला कसलाई र कसरी खोप दिने भनेर निर्णय गर्नुपर्नेछ,” बेलायती औषधि उत्पादनकर्ता एस्ट्राजेनेका कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष सर मिन पान्गालोसले बीबीसीलाई भने ।
सबैले २० प्रतिशत खोप प्रदान गरिसकेपछि अन्य मापदण्डहरूका आधारमा खोप वितरण गरिनेछ जस्तै देशको कमजोर अवस्था र कोभिड-१९ को तत्काल खतरालगायत मापदण्डहरु अवलम्बन गरिनेछन् ।
गाभीका अनुसार उसको योजनामा सहभागी हुने धनी देशहरूले तिनका १० देखि ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्‍ने खोपको मात्रा माग गर्न सक्छन् । तर सहभागी देशहरूका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नेगरी खोप वितरण नभएसम्म कसैलाई पनि बढी खोप प्रदान नगरिने गाभीले जनाएको छ । यसअघि युनसेफले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप ९२ वटा निम्‍न निम्‍न मध्यम आयम भएका मुलुकहरुलाई उपलब्ध गराउने बताएको थियो । बीबीसी
बर्दिवास घटनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर : मन्त्री यादव